अब कसले सम्हाल्ला नर्सिङ एसोसिएसनको जिम्मेवारी ? | We Nepali
अब कसले सम्हाल्ला नर्सिङ एसोसिएसनको जिम्मेवारी ?
२०७१ भदौ २५ गते १०:१३
एसोसिएसन पदाधिकारीहरु एउटा बैठकमा
लन्डन । नेपलिज नर्सिङ एसोसिएसन, यूकेको आगामी १४ सेप्टेम्बरका दिन एबीआइ कलेज लन्डनमा हुने वार्षिक साधारणसभाको तयारी अन्तिम चरणमा छ ।
उक्त साधारणसभाले नयां कार्यसमिति चयन गर्ने भएकाले यसपटकको साधारणसभालाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ ।
अध्यक्ष पदका लागि वर्तमान उपाध्यक्ष सुशिला कार्की र महासचिव प्रसुना कंडेलको नाम अग्रपंक्तिमा छ । अन्य पदाधिकारीहरु समेत जिम्मेवारी सम्हाल्न इच्छुक रहेको बताइन्छ ।
एसोसिएसनले निर्वाचन प्रक्रियाका लागि निर्वाचन समिति समेत गठन गरेको छ, जसमा श्रीमति टुका स्याण्डवेल प्रमुख निर्वाचन आयुक्त छिन् । निर्वाचन समितिमा कृष्ण भट्ट र कृष्ण तिवारी निर्वाचन आयुक्त छन् भने पर्यवेक्षकमा बच्चु कैलाश कैनी र कुल आचार्यलाई तोकिएको छ ।
एसोसिएसनको निर्वाचन तालिका समेत सार्वजनिक भएको छ । निर्वाचन समितिले उम्मेदवारी दर्ताका लागि आज सेप्टेम्बर १०, राती १२ बजेसम्म अन्तिम समयसीमा तोकेको छ भने उम्मेदवारी फिर्ता लिने समयसीमा १४ सेप्टेम्बर, राती १२ बजेसम्म निर्धारण गरेको छ । एसोसिएसनका अनुसार निम्न इमेल
[email protected] मार्फत उम्मेदवारी दर्ता गर्न सकिनेछ ।
एसोसिएसनले बेलायतमा कार्यरत नेपाली नर्सहरु, नर्सिङ पढिरहेका विद्यार्थी, नेपालमा क्वालिफाइड भएर यूकेमा केअररका रुपमा काम गरिरहेका नर्सहरु, डेन्टल नर्स सबैलाई साधारणसभामा उपस्थित हुन आग्रह गरेको छ । अध्यक्ष वासु लामिछानेले साधारण सदस्यता लिएर सक्रिय सहभागिता जनाउन अपिल गरेका छन् ।